Iforum yakho: UMartin Vrijland
Ukuqhubeka nokufunda eli nqaku okanye ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeforum, unokuba lilungu ngokunqakraza kwiqhosha 'lenkxaso yakho'. Oku kuya kukunika ukufikelela kulo lonke eli nqaku kunye neforum kwaye uthathe inxaxheba kumlo wehlabathi elingcono. Ngoku ungathatha inxaxheba kwangoko. Sele ulilungu ukusuka kwi- € 2 / ngenyanga kwaye ke ndixhase ukuze ndiqhubeke nokulwela inkululeko yakho.
Utyelelo lulonke: 2.615.443
IMinneapolis UGeorge Floyd Amapolisa Obuleleyo Indlela yokuDodobalisa iMfazwe yaBemi?
UMartin Vrijland op UDonald Trump udlala uhadi ngelixa iRoma isatsha, kanye njengoMlawuli uNero
Future op UDonald Trump udlala uhadi ngelixa iRoma isatsha, kanye njengoMlawuli uNero
SandinG op UDonald Trump udlala uhadi ngelixa iRoma isatsha, kanye njengoMlawuli uNero
Cubungula op UDonald Trump udlala uhadi ngelixa iRoma isatsha, kanye njengoMlawuli uNero